ဂေဇက်ရွာမှ….. ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာမှ….. ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဝိုင်း
Posted by ဇောက် ထိုး on May 16, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
…ဒကာကြီး ဦးမိုးလာဗျာထိုင် နံက်စာလေးသုံးဦး….
…ညက တပည့်တော် ရောက်တာ နောက်ကြသွားလို့ ဆရာတော်ဆီ မလာပဲ အိပ်လိုက်တော့တာဘုရား။ ညက ရွာလည်မန်ကျည်းပင်အောက်မှာ လူကလဲစုံတော့ညဉ့်နက်သွားတယ်။ ဆရာတော်ကိုလျှောက်ချင်တာလေးရှိ လို့ စောစောပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားတာကို မရလိုက်ဘူး။ ညဉ့်နက်သွားတယ် ဘုရား။
…ဘာများလျှောက်ချင်လို့လဲ ဒကာကြီး ဦးမိုး…
..ဒီနေ့ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်သင့် ..မလုပ်သင့်ဆိုတာ တပည့်တော် မစဉ်းစားတတ်ဖြစ်နေတယ်ဘုရား။ နိုင်ငံတကာက သတင်းဋ္ဌာနတွေမှာလဲ ဒီ အကြောင်းတွေကိုပဲ မေးဖြေတွေလုပ်နေကြတယ်။ အမေးခံရတဲ့ ဆရာတော် တွေကလဲ နိုင်ငံရေး မကင်းတဲ့ဆရာတော်တွေကများတော့ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံရေးလုပ်သင့်ကြောင်း။ ဘုရားတောင် ဆွေမျိုးတွေ ရေလုပွဲမှာ ၀င်ပါ ကြောင်း။ ၀ိဋဋူပကိစ္စမှာလဲ ဘုရားက ဆွေမျိုးတွေ မသေအောင် ပါဝင် ခဲ့ကြောင်း ဒါတွေပဲကြားနေရတယ်။ တချိုကတော့လဲ ဘုန်းကြီးတွေ နိုင်ငံ ရေးမှာ မပါဖို့အကြောင်း..ဘုန်းကြီးဟာဘာသာရေး ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုသံတွေ ကြားနေရတယ်ဘုရား။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မရောသင့်ကြောင်း…အဲဒီလိုကြားနေရတယ်။ အဲဒါ ..ဆရာတော် အမြင်လေး ကြားချင်နေတာဘုရား….
…အော်…ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဒကာကြီးမိုးရဲ့။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘယ်လိုအရေး လဲ။ ဘာသာရေးဆိုတာကကော ဘယ်လိုအရေးလဲဆိုတာတွေ အရင်သိမှ ဖြစ်မှာ။ ဒီတော့ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဘယ်လိုအရေးလဲသိအောင် အရင်လုပ်ရ အောင်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအရေး။ ပညာရေးအရေး… ကျန်းမာရေးအရေး..လူမှုရေးအရေး..တွေကိုပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေးလို့ ပြောကြ တာ မဟုတ်လား။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ စီးပွားရေး..ပညာရေ..လူမှုရေး..ကျန်းမာရေ တွေကောင်းအောင် အုပ်ချုပ်ခံနဲ့ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေလုပ်နေကြတဲ့ အရေးတွေကို နိုင်ငံရေးလို့ပြောတာမဟုတ်လား။
ဘာသာရေးဆိုတာကတော့….ဘာသာ..ဆိုတာ အလင်းရောင်လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတယ်။ လူတွေကို အသိဉာဏ်အလင်းရောင်ရအောင် လုပ်တဲ့အရေး.. လူတွေမှာ အသိဉာဏ်တွေမရှိဘဲ အမှောင်ထဲစမ်းတ၀ါးတ၀ါး မနေရအောင် လုပ်တဲ့အရေးကို ဘာသာရေးလို့ပြောရမယ်။
ကဲဆက်စပ်ကြည့်ရအောင်..နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး.. ပညာ ရေး စားဝတ်နေရေးတွေ အဆင်ပြေအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အုပ်ချုပ်သူနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံသူလူတန်းစား နှစ်ရပ်လုပ်တဲ့အရေးကို နိုင်ငံရေးပဲ။ အဲဒီ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ အုပ်ချုပ်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခံသူတွေ ကို အလင်းရောင်ရအောင်လုပ်ပေးရ မှာက ဘာသာရေးပဲ။အဲဒီလူတွေ အသိဉာဏ်မှန်အောင် အသိဉာဏ်ရအောင် လုပ်ပေးရမှာက ဘာသာရေးပဲ။ အသိဉာဏ်ရအောင်နော်…အာဏာရဖို့ မပါ ရဘူး။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ အာဏာရဖို့လဲမပါရဘူး။ အာဏာရှိသူတွေပြုတ်ဖို့ ထဲလဲ မပါရဘူး။ လူနဲ့လူ့လုပ်ငန်းတွေမှာမပါရဘူး။ဒီလိုဆို…..
နိုင်ငံတခုမှာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လူမှုရေး..ပညာရေး..စီးပွားရေး.. ကျန်းမာရေး..ငြိမ်းချမ်းရေး..ဆိုတဲ့အရေးတွေကောင်းဖို့ပဲ လုပ်နေကြရတာ ကို အဲဒီအရေးတွေမှာ ဘာသာရေးမပါရဘူးဆိုရင် ဘာသာရေးက ဘယ်နေ ရာမှာ ပါရမှာလဲ။ ဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာလဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နေရာကိုယ်တော့ သိဖို့သိပ်အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်နေရာ မဟုတ်တဲ့နေရာ ၀င်ပါရင်တော့ မဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာပဲ။ ရှင်းအောင် ပြောပြမယ်။
နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေက နိုင်ငံသူ/သားတွေရဲ့ စားဝတ် နေရေး လုံခြုံရေး စတာတွေကိုကောင်းအောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ဥပ ဒေတွေဆွဲပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့က သူတို့အလုပ်။ အာဏာရှိဖို့..အာဏာရဖို့.သူတို့ အလုပ်။ဒါက အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအလုပ်ပဲ။
အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားတွေကလဲ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေ မကောင်းရင် ကန့်ကွက်ရမယ်။တောင်းဆိုရမယ်။တင်ပြရမယ်။ လဲလှယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြ ရမယ်။ ဒါတွေဟာ အုပ်ချုပ်ခံလူ တန်းစားတွေလုပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေးအလုပ်ပဲ။
အဲဒီ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေရဲ့အလုပ်တွေထဲမှာလဲ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတွေမပါဝင်သင့်ဘူး။ အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားတွေရဲ့ အလုပ်တွေထဲမှာလဲ သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းတွေ မပါဝင်သင့်ဘူး။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းတွေ ဟာ အုပ်ချုပ်သူ…အုပ်ချုပ်ခံသူ..နှစ်မျိုးလုံးကလွတ်နေရမယ်။
အဲဒီအုပ်ချုပ်သူနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံသူတွေရဲ့ အထက်ကနေ အလင်းရောင်ပေးရမှာ အသိအလင်းတွေပေးရမှာ..အဲဒါဘာသာရေး။ပြောချင်တာကအုပ်ချုပ်သူတွေ ကလဲ အုပ်ချုပ်ခံသူတွေကို လောဘတွေ.. ဒေါသတွေ..မာနတွေ…စတဲ့ ကိ လေသာတွေနဲ့ မအုပ်ချုပ်ကြဖို့ ပြောရမယ်။ ဆိုရမယ်။တိုက်တွန်းရမယ်။
ထိုအတူပဲ…အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားတွေကိုလဲ.. မတရားတာတွေကိုတွန်းလှန် ကြ။ မကောင်းတာတွေကို ပြုပြင်ကြ။ကန့်ကွက်ကြ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို တွန်း လှန်ကန့်ကွက်ကြတဲ့အပေါ်မှာ လောဘတွေ..ဒေါသတွေ.. အာဃာတွေ.. အညိုး အတေးတွေနဲ့ မတုန့်ပြန်ကြဖို့ ပြောရမယ်။ ဆိုရမယ်။ တိုက်တွန်း ရမယ်။ အဲဒီလို ဘာသာရေးဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ရမှာ။ သာသနာ့ဝန်ထမ်း တွေလုပ်ဆောင်ကြရမှာ။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက နိုင်ငံကလူတွေကျန်းမာရေးကောင်းအောင် ကြံစည် တာတွေ.. စိတ်ကူးတာတွေ..တီထွင်တာတွေ..ကုသတာတွေ..လုပ်ရမှာ။ အဲဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကို သူ့ထက်ကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော်လူကြီးက အုပ်ချုပ်ရ မှာ။ဘုန်းကြီးက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဘယ်သူဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ရပ်မလုပ်ရဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စည်မျဉ်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ဖို့လဲမလုပ်ရဘူး။ ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်။ ဘယ်လိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့လဲ ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေအပေါ် မေတ္တာထားဖို့…လောဘတွေနဲ့မကုဖို့။ ဒေါသတွေနဲ့ လူနာတွေကို မဆက်ဆံဖို့။ ဒါတွေကို ဘုန်းကြီးတွေက ပြောရ..လုပ်ရမှာ။ အဲဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကို ပြည်သူတွေက မကြိုက်လို့ ဆန္ဒပြတဲ့အခါ တားမြစ်မှုလဲမလုပ်ရဘူး။ တိုက်တွန်းတာလဲ မလုပ်ရဘူး။ ဘုန်းကြီးတွေလုပ် ရမယ့်အလုပ်က ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်…ဆန္ဒပြတဲ့အပေါ်..လောဘတွေ.. ဒေါသတွေ…အညိုးအတေးတွေ အမုန်းတွေနဲ့ မကန့်ကွက်ကြဖို့..လုပ်ရမှာ။
အားလုံးအတိုချုပ်ပြောရရင်….သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ..ဘုရားအဆုံးအမတွေလူတွေသိပြီး လူထဲ ဘုရားအဆုံးအမတွေပျံ့နှံ့နေဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင် ရမှာ။
လူတွေကို ဘယ်လိုစီးပွားရေးတွေလုပ်ပါလို့ညွန်ပြရမှာမဟုတ်ဘူး။ လောဘ ဒေါသတွေနဲ့ စီးပွားရေးတွေမလုပ်ဖို့ ညွှန်ပြ ရမှာ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ။စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းတွေ..ဆရာဝန် တွေကိုညွှန်ကြားရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ လုပ်သူတွေထဲမှာ ကိလေသာဆိုတဲ့ လောဘတွေ ဒေါသတွေမပါအောင်လုပ် ကြဖို့ဟောရမှာ။
နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်သူတွေကို ဘယ်သူဖြစ်သင့်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်သင့်တယ်။ ဘာတွေလုပ်သင့်တယ်။ဘယ်လိုဥပဒေတွေရေးဆွဲသင့်တယ်ဆိုတာတွေမှာ ပါဝင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီသူတွေနဲ့အဲဒီလုပ်ရပ်တွေပေါ်မှာ လောဘတွေ..ဒေါ သတွေ…မာနတွေစတဲ့ စိတ်ယုတ်စိတ်ပုတ်တွေနဲ့မဆောင်ရွက်ကြ..မလုပ် ကိုင်ကြဖို့ပြောရမှာက ဘုန်းကြီးတွေပါရမယ့်နိုင်ငံရေးထဲက ဘာသာရေးပဲ။
အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားတွေကိုလဲ အုပ်ချုပ်သူတွေကိုပြန်ပြောဖို့တို့…ကန့် ကွက်ဖို့တို့….ထောက်ခံဖို့တို့…ဆန္ဒပြဖို့တို့….မပြဖို့တို့…ဒါမျိုးတွေမှာ ပါရမှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့လုပ်သင့်တယ်ထင်တဲ့အလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီလုပ်တဲ့အပေါ်မှာ လောဘ ဒေါသ စတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိလေသာ တွေနဲ့ မလုပ်ကြဖို့ကိုပဲညွန်ပြရမှာ…အဲဒါဘုန်းကြီးတွေလုပ်ရမယ့်နိုင်ငံ အရေး ပဲ။
ဘာသာရေးဟာ နိုင်ငံရေးရဲ့အထက်မှာရှိရမယ်။ အရေးအားလုံးရဲ့ အထက် မှာ ရှိရမယ်။ စီးပွားရေးထဲမှာလဲဘာသာရေးပါရမယ်။ ပညာရေးထဲမှာလဲ ဘာသာရေး ပါရမယ်။ ကျန်းမာရေးထဲမှာလဲ ဘာသာရေးပါရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပါပုံပါနည်းတော့တတ်ရမယ်။ဒါပဲ။
အုပ်ချုပ်သူ အာဏာရှင်ထဲပါပါ…အုပ်ချုပ်ခံသူ ပြည်သူထဲပါပါ…သူတို့လုပ်ရ မယ့်အလုပ် တွေထဲပါပြီ ဆိုရင်တော့ သူတို့နဲ့အတူတူဖြစ်သွားလို့ ညွှန်ပြ လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။
ဘာသာရေးဟာ လူ့အရေးတွေနဲ့ကင်းကင်းလာကြတယ်။ ဘာသာရေးဆို လူတွေက စိတ်မ၀င်စားကြတော့ဘူး။ စိတ်ဝင်စားသူ အတော်ကိုနည်းလာ တယ်။ ဘာသာရေးဟာ ဝေဘန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဝေဘန်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုပြီး ဘာသာရေးဟာ လူတွေသုံးမဖြစ်တဲ့ သီးသန့်အရေးကြီး လိုဖြစ်လာနေပြီ။ နောက်ဘာသာရေးဟာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပဲ..နောင် ဘ၀တွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့ အရေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတော့ လူတွေက ခုလက်တွေ့ ဘ၀တွေက အရေးကြီးနေတာဖြစ်တော့ ဘာသာရေးကိုပိုပြီး အရေးမထား နိုင်ကြတော့ဘူး။
အခု..ဘာသာရေးလုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလဲ သူတို့စီးပွားရေး ကျော်ကြားရေး..တွေအတွက်သာ စိတ်ဝင်စာပြီးလုပ်ဆောင်နေကြတာ။ တရားရရေးတို့…နိဗ္ဗာန်ရရေးတို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစီချီတက်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓရဲ့ ဒီမို ကရေစီကျတဲ့ ပြောဆိုချက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုထုတ်ပြပြီး ဘာသာရေး ရှေ့ကလမ်းညွှန်ပြရမှာ။ ခုတော့ လမ်းညွှန်ပြတဲ့ရှေ့ကနေရမယ့်သူတွေက …….နိုင်ငံမှာ လူတွေသာ ဒီမိုကရေစီရသွားမယ် ကျန်တာတွေရဖို့ မလွယ်ဘူး။ သာဓကပြပါဆိုရင် ….စာပေလွတ်လပ်ခွင့်မှာ ဘာတွေကျန် နေသလဲ။ သက်သေပဲ။
….ဘုန်းဘုန်းဘုရား..ကိုဗိုက်ကလေးက အရက်ကို ဘုရားလှူချင်လို့ဆိုပြီး လာပါတယ်ဘုရား……
…..ဟေ…ဘုရားကို အရက်လှူမလို့ဟုတ်လား…ကြားသားမိုးကြိုး…ကဲ ဒါကာကြီးဦးမိုး ဘာသာရေးကြောင်းပြီးမှ ဆက်ပြောကြဦးဗျာ…ပြောစရာတွေ ကကျန်သေးတယ်။ခုတော့ ဒကာဗိုက် ဘုရားအရက်လှူမှာဆိုတာ သွား မေးလိုက်ဦးမယ်။
ပိုစ့်တွေက တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအောင်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဇောက်ထိုးတင်ပြီဆို ဘာရယ်မှုတ်ဘူး ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်လိုက်မိတာပဲ
တများမှာအရက်ဆိုလို့ဒီတစ်လုံပဲရှိတာ ဘုရားလှူလိုက်ရင် ပြောင်သွားမပေါ့..
ပြီးတော့ ဘုရားကို ဒါတွေသွားလှူလို့ ဖစ်မလားဂျ
နာတောင် မလိုချင်လို့စည်းစိမ်တွေစွန့် လာတာ နာ့ကိုလာလှူတော့ နာကဘာလုပ်ရမှာလဲ ချိုပြီးတောင် အပစ်တင်ဦးမယ်
အုပ်ချုပ်သူကိုကော အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူကိုကော ဘ၀အလင်းရောင်ရအောင် လမ်းညွှန်ပေးရမဲ့သဘောပေါ့..
သဘောကျပါတယ်…ခက်တာက ဘုန်းကြီးထက်ကြီးတဲ့လူတွေ သာသနာရေး ၀ံကြီးဆိုကလားပဲဗျ
သူရို့ က ဟိုဟာလုပ်ပါ ဒီလိုလုပ်ပါနဲ့ ဘာညာတွေရှိတယ်.သဘောမကျရင် ကိုယ့်ကျောင်းတောင် ကိုယ်မနေရတာတွေ ရှိတယ်
ပြည်သူတွေ လက်ရှိဘ၀ကောင်းစားရေးအတွက် ဓာတ်ဆီဈေးချဖို့စီတန်း မေတ္တာပို့ တယ်..
ငမိုက်သားတွေက သနတ်ဒင်နဲ့ ထုတယ်…မျက်ရည်ဗုံးခွဲတယ်..ဖမ်းတယ်..ကျောင်းကို ၀င်စီးတယ်..မိတဲ့ဘုန်းကြီးကို
ခေါင်းပြောင်ပြောင် သွေးထွက်အောင် ရိုက်တယ်..ထောင်ချခဲ့တယ်.
အဲတာတွေကြောင့် ဘုန်းကြီးနဲ့ ပြည်သူ .နှစ်ခုစလုံး အစိုးရအောက်မှာပဲ ရှိနေခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ..
ဘယ်နေ့ ကျရင်တော့ ဘုန်းကြီးဟောတဲ့ ကိလေသာမပါတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးတရားကို နာယူကြမလဲ သေချာမသိပါဘူးဗျား.
စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုလို့ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင် အူးအူး ဒေါ်ဒေါ်တို့ အတွက်
ဆင်ဆာဘုတ်စနစ် ဇွန်လမှာ ဖျက်သိမ်းဖို့ သတင်းလေး တွေ့ မိလို့ သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါတယ်ဗျား..
နောက်ဘာသာရေးဟာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပဲ..နောင် ဘ၀တွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့ အရေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတော့
ဘာသာရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင်မလေ့လာလို့ ထေရ၀ါဒ ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ တရားတွေကို မမြင်နှိုင် မသိနှိုင်ကြလို့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ အသုံးမချနှိုင်တာပါ…
အနိမ့်ဆုံးအဆင့် သုံးဆယ်ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်နဲ့ ညီအောင် နေနှိုင်သူဟာ အောက်တန်း နောက်တန်းကျတဲ့ ဘ၀ကို မရောက်ပါဘူး..။
ဆင်းရဲတာ နုံချာတာ ထေရ၀ါဒကြောင့်မဟုတ်ဘူး..
မှန်မှန်ကန်ကန် မလိုက်နာလို့ .
မောင်ဗိုက်က “ဘုရားကို အရက်လှူမလို့” ???????
“ဘုရား ကို ဆွမ်းလှူမယ်၊ ပန်းလှူမယ်၊ သစ်သီးလှူမယ်၊ ရေချမ်းလှူမယ်” လို့ဘဲ ကြားဘူးတာဘဲ။
ဒီတစ်ခါ အကြောင်းလေး ကို သဘောကျတယ်ပြောရင် ဘုန်းဘုန်း တွေကို “မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြ၊ ဘုန်းကြီးစာချ” စကားပုံလိုမျိုးများ ဖြစ်နေမလား။
ဒါထက် တုံကလေး နဲ့ ပုခ်ျကလေး ရေ
Post လေးတွေကို ဖတ်သွားပြီ။
အတွေး တွေနဲ့ ပြန်လာမယ်။ :-)
ကျွန်တော်စာကို ခုလိုအားပေးတာ ကျေးဇူးတင်သလို ၀မ်းသာ ပျော်ရွင်မိပါတယ်။ကိုငှက်ကလေးတို့ မခင်လတ်တို့ရေ ကျွန်တော်မှာ စာရေးရတာ မပန်းပေမယ့် မီးရယ်..လိုင်းရယ်..နဲ့ ဆိုတော့ ပြန်ပြီးရှင်းချိန်က သိပ်မရဘူး။ခွတ်လွတ်ကြပါဗျာ…. ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးမူလေးတော့ချထား ပါတယ်။ ဖတ်သူတွေ ကောင်းကျိုးရရမယ်။ ရေးသူရော ဖတ်သူ ရောသိနိုင်တာတွေကိုပဲရေးမယ်။(လူတိုင်းဘာသာတိုင်းက လက်ခံစေချင်လို့ပါ) ခေတ်ကာလတိုင်းမှာမှန်နေပြီး လက်တွေ့ အကျိုးပြနိုင်လောက်တာတွေကိုပဲ ရေးမယ်။ သူများတွေကိုလဲ ထုတ်ပြနိုင်ရယ်။ လူတွေအလုပ်လုပ်ရင်း ကျင့်နိုင်လိုက်နာနိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပဲ ရေးမယ်။ စာတတ်သည် ဖြစ်စေ…စာမတတ်သည်ဖြစ်စေ…(ကျမ်းကြီး ပေကြီးကိုရည်ရွယ်ပါသည်) ကျွန်တော်စာကိုဖတ်နိုင် ရင် နားလည်နိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ မူ ၆ချက်နဲ့အညီရေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီးရေးပါတယ်ဗျာ….
ကိုမှောဆရာကိုလဲ ရှင်းပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ…ဒီနေ့တချို့လူတွေက ဘာသာရေးကို လက်တွေ့ဘ၀နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မြင်လာကြတာကိုပြောတာပါ။ တကယ်က ကျွန်တော်တို့ဘာသာဟာ လက်တွေ့အဆန်းဆုံး ဘာသာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြောင့် မွဲတာမဟုတ်ပေမယ့် ဒီနေ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတော့ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ….မသတ်ရဘူး…မခိုးရဘူး…မလိမ်ရဘူး…ကာမမကြူးရဘူးလို့ သီလတွေကိုဟောနေကြပါတယ်။ အဲဒီလို မသတ်တာ မခိုးတာ..မလိမ်တာလောက်ကိုပဲ သီလပြည့်စုံနေပြီလိုထင်နေ ကြတာဟာ ဟောသူတွေမှာ တာဝန်မကင်းပါဘူး။ တကယ်တော့ မသတ်ရုံ…မခိုးရုံ…မလိမ်ရုံနဲ့ဘာမှသိပ်ဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သူများအသက်ကယ်ရမယ်။ သူများဥစ္စာစောက်ရှောက်ရမယ်။ မှန်တာကိုပြောရမယ်ဆိုတာတွေလဲ သီလလို့ လူတွေ အသိနဲပါ တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက သေရည်သေရက်မသောက် ဖို့ ဘုန်းကြီးရှေ့သီ လစောင့်နေတာကို သီလလို့သိကြပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံ တွေက မူးရစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးတွေကို ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ မကောင်းတာကို မလုပ်တာထက် ကောင်းတာတွေလုပ်ရမယ်လို့မသိကြတာ…ပြောသူတွေမှာတာဝန်မကင်းပါဘူး။ စာဖတ်သူတွေကိုအားနာပါတယ်။ နောင်မှပဲ အကျယ်ကို အဆင် သင့်ရင် ရှင်းပြပါတယ်။ ကိုကြီးမှော်…..အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ လုပ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံရေးထဲက ဘာသာရေး ဆိုတာကို သဘောကျပါတယ်။
ဆိုတာကတော့ သိပ်မမှန်ဘူးထင်တယ်။ လက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတွေထဲမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အများစုဟာ ပြည်သူပြည်သားဒကာဒကာမတွေရဲ့ လူမှု့ရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေးမှစလို့ တတပ်တအား ကြောင့်ကျစိုက်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သိပ်စံနစ်မကျဘူးပဲထား မရှိတာထက်တော့ တော်သေးတာပေါ့။ စံနစ်ကျတာတွေ နောင်မှာ အလုံအလောက်များလာရင်လဲ ရဟန်းတွေဟာ လူမှု့ရေးကိစ္စတွေမှာ အလိုလို နောက်တန်းရောက်သွားမှာပါ။ လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ကျေးဇူးတော်တော်ကြီးပါတယ်။
( ဘာသာရေးဟာ ဝေဘန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။)
ဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်လဲမဖြစ်သင့်ဘူး။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို စကားတလုံးထဲနဲ့ပြောရရင် ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒ သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိစစ်နိုင်တဲ့ဝါဒ လို့တောင် အဌကထာများမှာ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ သို့သော် အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဝေဘန်တာကသပ်သပ် စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာက သပ်သပ်ဖြစ်ပါတယ်။
(ဘာသာရေးဟာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပဲ..နောင် ဘ၀တွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့ အရေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာ)
တာကတော့ ဘုန်းကြီးတချို့ရဲ့ တာဝန်မကျေမှု့ကြောင့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ ဘာသာရေးဟာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ လုံးဝသက်ဆိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိဘ၀နဲ့ တသားထဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။ နောက်ဘ၀ဆိုတာက နောက်ဘ၀မှာဘာဖြစ်မယ်/ဖို့ ဆိုတာက ယခုပြုတဲံ့အကြောင်းရဲ့ အကျိုးဝိပါက်အဖြစ်သာ ပြဆိုတာဖြစ်ပြီး နောက်ဘ၀ကျမှ တခုခုဖြစ်ဖို့အတွက် ဘာသာရေးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုဘ၀တင် လက်ငင်းအကျိုးရှိဘို့ ဘာသာရေးလုပ်ရတာ(ရတနာသုံးပါးဆည်းကပ်ရတာ)ပါ။
တရားဂုဏ်တော် ခြောက်ပါးကို ကြည့်ပါ ။ နောက်ဘ၀အတွက် ဘာတလုံးမှမပါပါဘူး။
(အခု..ဘာသာရေးလုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလဲ သူတို့စီးပွားရေး ကျော်ကြားရေး..တွေအတွက်သာ စိတ်ဝင်စာပြီးလုပ်ဆောင်နေကြတာ။)
အဲဒါကတော့ အနည်းအကျဉ်းဟုတ်ပါတယ်။ (အရမ်းတော့လဲ မနည်းဘူးထင်တယ် )။ အများစုကတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုဇောက်ထိုးကိုပြောချင်တာ ၂ ချက်ရှိပါတယ်။
၁-ယခုကွန်မင့်ဟာ အပြုသဘောနဲ့ လေးလေးစားစား ပြန်ဆွေးနွေးတာပါ။ ကိုဇောက်ထိုးကို အတိုက်အခံလုပ်ဘို့ မရည်ရွယ်ပါ။
၂- ကျုပ်ဟာလဲ ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအခြေအနေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေလိုစိတ် ကြီးမားစွာရှိသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပြုပြင်ကြရင်ကောင်းမယ်ဟေ့ ဆိုတာမျိုးကိုတော့ ဘယ်သူနဲ့မှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းပြောလို့ မရဖူးသေးပါဘူး..။
(မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး- အရှင်ဇနကာဘိဝံသလို လူမျိုးတောင်မှလဲ မလုပ်နိုင်ခဲံ့ပါဘူး..)
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ၊သဘောတူပါတယ် (အမှန်က ကိုယ်လည်းဘာမှ သိတာမဟုတ်ဘူး :D)
ဒါနဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ဘုရားကြီး ရေးတဲ့ အနာဂါတ် သာသနာရေးစာအုပ် ထဲမှာ ဒီလို ပြင်ဆင်စရာလေးတွေ ကို ထောက်ပြထားတယ်ထင်တယ်ဗျ။
စစ်တပ်တောင် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး လွှတ်တော်ထဲ ၂၅% ဘလိုင်းဂျီး နေရာယူထားသေးဒါဘဲ.. ဘုန်းကြီးတွေလည်း သာသနာကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီး ၂၅%လွှတ်တော်တွင်း တောင်းဆိုဂျပါလား..။
ဟား ဟား..တယ်တော်ဒဲ့ ငါကွ… :cool:
အဲဒိကိတ်စကဒေါ့ အူးဘဇင်း အူးကြောင်ဂျီး ဂဒုံးတုံးသင်္ကန်းဝတ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲ တိုးဝင်မှ နေရာ ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖလာ့
ဦးဦးပါခင်ဗျာ..ကျွန်တော့်စာလေးကို ဆွေးနွေးပေးတာ ကျေးဇူး ပါခင်ဗျာ….(ဘာသာရေးဟာ လူ့အရေးတွေနဲ့ကင်းကင်းလာကြ တယ်ဆိုတာ မကင်းစေချင်လို့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။) ဘာသာရေးနဲ့လူ့အရေးမကင်းစေချင်တဲ့ပုံကလဲ…ဆိုကြပါစို့. .လူတွေကျန်းမာရေးကိစ္စတွေမှာ…ဆေးဝါးတွေဝယ်ပေးဖို့ထက် ၀ိုင်းဝန်းချင်စိတ်…ကူညီချင်စိတ်…မေတ္တာစိတ်..တွေလူတွေမှာ များပြားဖို့ ပြောဆိုကြရမှာလို့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။(ကျွန်တော်ပြော ချင်တာလေးကို ဒုတိယပိုင်းမှာ ဥပမာနဲ့တင်ပြပါမည်။)
(ဘာသာရေးဟာ ဝေဘန်ကောင်းတာမဟုတ်လို့ဝေဘန်လို့ရတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဘာသာရေးဟာ လူတွေသုံးမဖြစ်တဲ့ သီးသန့်အရေးကြီး လိုဖြစ်လာနေပြီ။)လို့ပြောတာပါ။ ဖြစ်စေချင် တာက ဘာသာရေးဟာ ဝေဘန်ရမယ့် အရေးဆိုတာကို သိစေ ချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ အများအားဖြင့် ဘာသာရေးကို လူတွေ ကြောက်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့ ဒီမှာတောင် အမှတ် မပေးရဲဘူးမဟုတ်လား။ အခြားသော ဆိုက်တွေမှာလဲ တချို့ဆိုက် တွေမှာ ဘာသာရေးလုံးဝမပါသလောက်ပါ။ ဘာသာ ရေးကြောင်းပြောကြရမှာကိုလူတွေတော်တော်ကြောက် ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်က မကြောက် စေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဒီနေ့ရဟန်းပညာတတ်တွေ သိပ်များလာပါတယ်။ အဲဒီ ပညာတတ်ရဟန်းတွေ..မဟန အဖွဲ့အစည်းလို အပါး ၅၀…လောက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထင်သာ မြင်သာတဲ့ ဘာသာရေးအယူအဆ ဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ ဋ္ဌာန တစ်ခုရှိရင်သိပ်ကောင်းမယ်။ မေးတဲ့သူရဲ့ စာတွေကိုလဲ ဖတ်ပြ.။ တင်ပြ။ အဖြေကိုလဲ လူတွေသိအောင်…နိုင်ငံသိအောင် ကမ္ဘာသိအောင်..ဖြေရှင်း…ရုပ်သံလိုက်ရော…အင်တာနက်လိုင်း ရော အမြဲထုတ်ပြနေရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့။။ ဒီနေ့ မဟနက မိန်းမမှု…ကျောင်းမှု..တွေကိုပဲ ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ ဘာသာရေး မေးခွန်းတွေကို မဖြေကြပါဘူး။ တပါးချင်းဘုန်းကြီး တွေကိုမေးရင်လဲ အငေါက်ခံကြရတာ များ ပါတယ်။…ကျွန်တော် ဆန္ဒပါ။
(ဘာသာရေးဟာ လက်ရှိဘ၀နဲ့ သိပ်မဆိုင်ပဲ..နောင် ဘ၀တွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့ အရေးတစ်ခုလိုဖြစ်လာ) ဆိုတာလဲ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကို ပဲတင်ပြတာပါ။ အခုလူတွေက အဲလိုမြင်လာပါကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကပဲ နောင်ဘ၀ရဲ့ အကျိုးတရားတွေကိုပဲ ဦးစားပေးပြောဆိုနေကြတယ်မဟုတ်လား။ နောင်ဘ၀အကြောင်း မပါရင်……မိုးပြာလို့တောင် တန်းစွပ်စွဲပြီး အဓမ္မလို့လုပ်ကြ တော့တာကိုး…. တကယ်က ကျွန်တော်တို့ ဘာသာဟာ လက်တွေ့ဘ၀မှာလဲ အသုံးချရတဲ့ ဘာသာဆိုတာ ကိုပြောချင်ပါတယ်။ လူတွေသိစေချင်ပါတယ်။ (အခု..ဘာသာရေးလုပ်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလဲ သူတို့စီးပွားရေး ကျော်ကြားရေး..တွေအတွက်သာ စိတ်ဝင်စာပြီးလုပ်ဆောင်နေကြတာ။) ဆိုတာကိုတော့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားအမြင်ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ နာမည် ကျော်ဆရာတော်ကြီးတွေနောက်လိုက်နေသူ အတော် များများကို ကျွန်တော်လေ့လာဖူးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘုန်းကြီးနာမည် ကျော်ရေးအတွက်…ကိုယ့်အသင်းအဖွဲ့ အောင်မြင်ရေးအတွက် လူတွေရဲ့စီးပွားရေးဆိုက်တွေလိုပဲ ကျွန်တော် တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ တရားကိုနှစ်သက်ပြီး တရားရဖို့အတွက်ပဲဆိုတာလောက်ကတော့ တွေ့ကိုမတွေ့မိသေးလို့ပါခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်…ဦးဦးပါကို ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ ခုလိုဆွေးနွေးတာကိုလဲ ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘာသာကို ကောင်းစေချင်တာ တစ်ခုအတွက်နဲ့ ပြောနေကြတယ်လို့သိရင်…အားလုံးဝမ်းသာ စရာပါ။ မင်္ဂလာပါ ဦးလေးပါ…..
ဂေါတမဗုဒ္ဓက.. သူ့ဒကာဗိမ္မိသာရမင်းကြီးကို..ရက်ရက်စက်စက် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်နေတဲ့.. အဇာတသတ်မင်းကို .. အဲလိုအချိန်မှာ.. သွားပြီးတားမြစ်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးလေ..
သူကြီးခိုင်ကိုလေးစားတယ်ဗျာ…တကယ်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်တမင်ချန်ထားသေးတဲ့ ဒီဗိမ္ဗိသာရ ကိစ္စကို သူကြီး မြင်လိုက်တာတော့ ကျွန်တော်သဘောကိုကြသွား တာပဲ။ ကျွန်တော်က ဘုန်းကြီးတွေတင်ပြကြတဲ့ ၀ိဋဋူပတို့ ရေလု ပွဲတို့ကိုပဲ လုပ်သင့်တဲ့ဘက်က ကိစ္စတွေကိုပဲ တင်ပြနေတာ…ဒီဗိမ္ဗိသာရကို တမင်ကိုချန်ထားတာ…သူကြီးရဲ့ ဒီအမြင်ကို ကျွန်တော်ရင်ထဲက အရာလေးဆွဲထုတ်ပြလိုက်သလိုပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကြီး။ ကျွန်တော်လိုရ..မယ်ရ သိမ်းထားတာလေးဗျို့….. ဒါပေမယ့် သူကြီးပြောတဲ့ ပါးနပ်တာဆိုတာကိုတော့ ရွာသားအများ လက္ခံပါ့ မလားဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်…ဘုရားပေါ်ဖိနပ်စီးခဲ့ပြီး ခံရမယ့် ၀ဋ်လို့ယူဆကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ဒါကိုတော့ ရွာသား အများလက်ခံကြပါမလား..ပူပန်မိတယ်။ ပညာရှိဆိုတာ အကြောင်းမှန်ကိုသိတာတဲ့…..စာတတ်လို့ပညာရှိလို့ခေါ်တာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ဆရာအောင်သင်းဟောပြောပွဲတွေမှာတော့ အပ်ကြောင်းကိုထပ်နေတာပဲဗျို့……
သူဂျီး တော့ ပီတိ အိုးကွဲ လောက်ရောပေါ့။ ;-)
နန်းမတော် မယ်နုကို အဆုံးစီရင် ခါနီး အင်းဝဆရာတော် ဦးဗုဓ်က ‘‘ဟဲ့ မယ်နု . . .၊ သူ့ကြွေးရှိရင် ဆပ်ရပေလိမ့်မယ်။’’ လို့ပြောခဲ့ သလိုမျိုး လို့ ပြောတော့မလို့။
ဥပဒေ အထက်မှာ ဘာမှ မရှိ ရ ဘူး ဆိုတာကို တကယ် ဥပဒေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နဲ့ အမှန်ကျင့်သုံးခဲ့ရင် ဥပဒေအထက်မှာ ဘာသာရေးလဲ မရှိသင့်ဘူး။
ဥပမာ – ဘာသာရေး အကြောင်းပြပြီး လူသတ်တာ၊ လိမ်တာ၊ လူလူချင်း အနိုင်ကျင့် ညှင်းဆဲတာတာ။ (မည်သည့်ဘာသာရေးကို မဆို ညွန်းပါသည်)
ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ၀င်ဖတ်သွားပါကြောင်း။
ကိုယ်တိုင် လေ့လာမှုအားနည်းသဖြင့် ၀င်ရောက် မဆွေးနွှေးနိူင်သည်ကို ၀မ်းနည်းပါကြောင်း။
တရားစာ အနည်းငယ်သာရ၍ အနက်အဓိပ္ပါယ် သိအောင်ကြိုးစားပီး နေ့စဉ် ရွတ်ဖတ်ပါကြောင်း(မူးလာလဲ ရွတ်ပါတယ် အယူအဆ မှန်မမှန်တော့ မသိ)…………….
ရှားပါး ပို့ စ်မို့ သဘောကျ အားပေးသွားပါတယ် ကိုဇောက်ထိုးရေ။